Ndị ọrụ Katọlik Katọlik - WRSP
AKWELKWỌ AKWATKWỌ AKWATKWỌ CATHOLIC
1877: Peter Maurin mụrụ na Oultet, France.
1897: Dorothy Day mụrụ na Brooklyn, New York.
1926: A mụrụ ada Dorothy Day, Tamar Teresa.
1927: robọchị Dorothy ghọrọ onye Katọlik.
1932: Dorothy Day zutere Peter Maurin na New York City.
1933 (May 1): Dorothy Day na Peter Maurin malitere ibipụta Onye ọrụ Katọlik akwụkwọ akụkọ dị na New York City.
1933: Day na Maurin malitere "ụlọ ọbịa" nke mbụ na New York City, nke mechara bụrụ onye ama ama St. Joseph House (nke mechara soro Maryhouse).
1939-1945: Onye ọrụ Katọlik Mgbasa mgbasa a gbadara n'ihi ọnọdụ udo nke Day na ndị editọ ndị ọzọ n'oge Agha IIwa nke Abụọ.
1949: Peter Maurin's Ihe Mgbochi Oke e bipụtara.
1949: Peter Maurin nwụrụ na ụlọ ọrụ Katọlik Katọlik dị nso na Newburgh, New York.
1952: Dorothy Day's autobiography, Ogologo Ogologo, e bipụtara.
1980: Dorothy Day nwụrụ na Maryhouse Catholic Worker na New York City.
1983: Ndị ozi ala ọzọ nke Claretian gosipụtara atụmatụ maka ụbọchị canonization.
2000: Pope John Paul II nyere ọnọdụ statusbọchị “Ohu Chineke”, nzọụkwụ mbụ iji nye iwu.
2012: Nzukọ United States nke ndị bishọp Katọlik kwadoro ihe kpatara Daybọchị maka ịdị nsọ.
2014: N'ime obodo 225 Katọlik na-arụ ọrụ dị gburugburu ụwa.
Ọ bụ onye ọrụ Katọlik guzobere ya Ụbọchị Dorothy na Peter Maurin. Ọ bụ ezie na Day bụ onye a kacha mara amara nke abụọ, Maurin bụ okenye. A mụrụ ya aha ya bụ Aristide Pierre Maurin na Oultet, France na 1877, nwa nwoke onye ọrụ ugbo na-akọ ugbo nke France na otu n'ime ụmụaka 24. Amụrụ n'ime ezinụlọ Katọlik, mgbe ọ bụ nwa okorobịa o lere ndụ okpukpe anya, sonye na Christian Brothers. Onye okike ma bụrụ onye dị jụụ nke sitere na nkà ihe ọmụma ndị France, ọkachasị ọrụ Emmanuel Mounier, Maurin chọrọ ibi ndụ dị mfe na nke dị ùgwù nke ọrụ ọrụ aka. Na 1909, ọ kwagara Canada na mgbe e mesịrị na US, na-arụ ọrụ n'ọtụtụ ọrụ dị ka onye ọrụ aka na-arụ ọrụ, nke mechara kpọga ya na New York City.
Afọ iri abụọ ka a mụsịrị Maurin na France, a mụrụ Dorothy Day na Brooklyn, New York. Nna ya bụ onye nta akụkọ, ezinụlọ ahụ kwagara San Francisco na Chicago ka ọ na-agbaso ọrụ ahụ. N'ịbụ onye akpọrọ Episcopalian, Day mechara kọwaa na ọ nwere ezigbo mmasị na okwukwe na Chineke dị ka nwatakịrị n'agbanyeghị na ndị mụrụ ya anaghị etinye aka na okpukpe. Dịka okenye, Day ghọrọ onye nta akụkọ n'onwe ya, na-ede akwụkwọ maka akwụkwọ akụkọ mmekọrịta ọha na eze na ọchịchị anwansi na New York City. Onye nkwado siri ike nke ikike ndị ọrụ na ihe kpatara nwanyị, Daybọchị sooro ndị na-eche echiche, ndị ndọrọ ndọrọ ọchịchị, ndị ọkà ihe ọmụma, na ndị na-ese ihe na omenala ndị bohemian nke NewYork City na 1920s, na-agụta Eugene O'Neill dị ka ezigbo enyi. N’ime afọ iri abụọ ya, ọ tụrụ ime wee sikwopụ ya. Ka oge na-aga, ọ hụrụ onye ọkà mmụta ihe omimi aha ya bụ Forster Batterham, onye ghọrọ di na nwunye iwu ya. Mụ na ya nọrọ afọ anọ ọ happyụ, n’oge ọ tụụrụ ime. N’ihi ọ joyụ na obi ekele nwa ya, ọ malitere ịga ụka n’otu ụka Katọlik dị nso n’ụlọ ha na Staten Island, New York. Mgbe o kwupụtara ọchịchọ ya ịghọ Katọlik na ime nwa ha baptizim, Forster, onye ekweghị na Chukwu nke na-achọghị obere ihe gbasara okpukpe, gbara ya ume ka ọ ghara ịgabiga ya. Ha abụọ mechara kewaa, ahụmịhe ụbọchị ahụ mechara kọwaa dịka otu n’ime mkpebi kacha egbu mgbu nke ndụ ya: ịhọrọ Churchka n’elu ịhụnanya ya maka Forster.
Mgbe ọ gbanwechara okpukpe Katọlik, Day chọrọ ụzọ iji mee ka nkwenye ya na Chineke jikọtara ọnụ na ogologo oge ya maka ikpe ziri ezi. Ọ hụrụ alụmdi na nwunye nke ndị a na nkuzi mmekọrịta Katọlik na nke Peter Maurin, onye ọ zutere na New York City na 1932. Ha niile, Maurin na Day kpebiri, na akụkụ ụfọdụ n'ihi nzụlite ya na akwụkwọ akụkọ, ịmalite akwụkwọ akụkọ lekwasịrị anya n'okwu metụtara ikike ndị ọrụ site na echiche Katọlik. Ubochi omumu Onye ọrụ Katọlik akwụkwọ akụkọ mere n'etiti oke oke ndakpọ olileanya na United States. Na mgbakwunye na ibipụta akwụkwọ dị mkpa maka mgba nke ndị ọrụ, Day na Maurin chọkwara ụzọ iji nyere ndị ogbenye na ndị na-enweghị ọrụ aka n'ụzọ ihe onwunwe, na-eme ihe a maara na ọdịnala Katọlik dịka "Ọrụ nke Ebere:" na-enye ndị ọrịa nri, na-a drinkụ mmanya ndị akpịrị na-akpọ nkụ, na-eme ka ndị na-enweghị ebe obibi biri, na-anabata ndị ọbịa, na-eleta onye mkpọrọ, na-eyiri ndị gba ọtọ, na-eli ndị nwụrụ anwụ. Nzaghachi ha: ụlọ ọbịa.
Day na Maurin malitere ịkpọ ndị mmadụ ka ha nọrọ n'ụlọ ha na Lower East Side nke New York City, na-ekerịta nri ha ma na-enye ndị nọ ná mkpa akwa (ma ọ bụ ọbụna n'ala). Ha kwenyere na otu n'ime nsogbu ndị ọrụ na-elekọta ndị ọrụ gọọmentị bụ na ha abụghị mmadụ. N’adịghị ka nke a, ndị ọkà ihe ọmụma France nwere njiri mara nke onwe, bụ ndị hụrụ mkpịsị ugodi nke “ọha mmadụ nke ọ dị mfe ịdị mma” nwere mmetụta siri ike na Maurin ka ha na ndị mmadụ na-emekọrịta ihe site na mmekọrịta onwe onye ma nyere nwanne ha nwoke ma ọ bụ nwanne ha nwanyị aka
ịchụ onwe onye n'àjà. Ka oge na-aga, mbọ ha gbalitere bụrụ otu ndị ọrụ afọ ofufo bi na ụlọ nke East East Side (nke a na-akpọ "St. Joseph House") na ndị mmadụ na-achọ ebe obibi site n'okporo ámá, na-agba ọsọ ofe kwa ụbọchị nke na-agbadata ala na mbipụta iberibe na Tọ Katọlik Ọrụ akwụkwọ akụkọ na-akatọ ọgba aghara mmekọrịta mmadụ na ibe ya, nke ime mmụọ, na nke onwe onye na-akpata nsogbu ndị dị ka ịda ogbenye na ịkpa ókè agbụrụ. Ka oge na-aga, akwụkwọ akụkọ ahụ (na ndị ọrụ Katọlik Katọlik) lekwasịrị anya n'okwu nke ime ihe ike na militarism, yana nguzo udo nke otu a na nnupụisi nke ndị na-emeghị ihe ọ bụla bụ ihe dị mkpa maka ịdị adị ya n'oge Agha Obodo Spanish, Agha IIwa nke Abụọ, Vietnam Agha, na n'oge ugbu a.
Ka mgbasa akụkọ mgbasa ozi na-eto ma akụkọ banyere ụlọ ọrụ nnabata na-agbasa, ndị Katọlik na-arụ ọrụ Katọlik mụrụ ihe a bịara mara dịka ndị ọrụ Katọlik. Oflọ ndị ọbịa, na-esokarị nke ha akwụkwọ akụkọ na-akọwa ọrụ ha, malitere ịmalite na United States. Ka ọ na-erule 1940, ihe karịrị obodo iri atọ ndị Katọlik na-arụ ọrụ guzobere site na otu mpaghara dị iche iche na mba ahụ nwere mmasị n'ụdị ọrụ Day na Maurin kọwara n'akwụkwọ akụkọ ha. Uzo mmeghari a bu, ma gara n'ihu na-aga n'ihu, na adighi edozi. Onweghi ikike onye ọ bụla chọrọ iji bido obodo Katọlik, ma ọ bụrụ na ọhụụ nke ọhụụ na omume Katọlik ekwesighi ịgbaso otu usoro ma ọ bụ ụdị. N'ezie, oge ụnyaahụ nke ụbọchị gara aga mere ka mkpebi ya dịrị na ngalaba nke ndị metụtara ya gwara, nke hapụrụ ohere maka enweghị obi ebere na okike karịa ikike na iduzi na-ekwupụta oke nke obodo. Ọ bụ ezie na ndị ndu n'ezie nke ndị obodo dị iche iche maara nke ọma mgbe ụfọdụ, njikọ dị n'etiti ndị ọrụ Katọlik dị iche iche adịkarịghị agafe karịa ọbụbụenyi nkịtị.
Ka ọ na-erule afọ 2014, ihe karịrị ụlọ 225 ndị ​​ọrụ Katọlik dị na United States na gburugburu ụwa. Fọdụ ndị na-ekiri ihe na-eche na njem ahụ ga-apụ mgbe ụbọchị ọnwụ gasịrị na 1980 nyere ya isi dị ka ihe atụ maka njem ahụ dum. Ma mgbe mmegharị ahụ malitere oge, gụnyere mgbe ụbọchị ọnwụ gasịrị, ọ na-aga n'ihu na-aga nke ọma n'ọtụtụ ụzọ. Ndị ọrụ Katọlik na US, Ireland, Germany, Mexico, na mba ndị ọzọ na-enye ndị agụụ na-agụ nri ma na-enye ndị na-enweghị ebe obibi nri, na-ebipụta akwụkwọ akụkọ na-akatọ amụma mmekọrịta mmadụ na ibe ya ma na-atụgharị uche n'okwu ime mmụọ, wee nwụchie ya maka mkpesa agha na militarism n'ụwa niile.
N'ihi na ọ bụ usoro ejikọtaghị ọnụ, nkwenkwe dịgasị iche site na ndị ọrụ Katọlik na-arụ ọrụ na obodo na n'ime obodo. N'agbanyeghị nke ahụ, ọtụtụ ìgwè dị iche iche na-emekọ ụkpụrụ ndị yiri ya, nke a na-ahụkarị nke a na-ekwu na "The Aims and Means of the Catholic Worker," nke a na-ebipụta kwa afọ na Onye ọrụ Katọlik akwụkwọ akụkọ. Ebumnuche ndị a na ụzọ ha si gbado anya na ịmepụta ọha mmadụ, dị ka onye guzobere Peter Maurin kwuru, "ebe ọ dịịrị ndị mmadụ mfe ịbụ ezigbo mmadụ" nke etiti na "ikpe ziri ezi na ọrụ ebere nke Jizọs Kraịst." Ha na-akwado maka ime ihe onwe onye (na-elekwasị anya n'ibu ọrụ onwe onye maka ịgbanwe ọnọdụ kama ịdabere na steeti maka "ọrụ ebere na-enweghị isi") yana ịkọwapụta nke ụlọ ọrụ ọha na eze na "mgbanwe akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ" nke na-azụlite ọrụ ugbo na nka nka maka afọ ojuju na ọrụ bara uru. Ọ bụ ezie na ụkpụrụ ndị a na-emetụta ọdịbendị nke ọtụtụ ndị ọrụ Katọlik, ọrụ ha na-elekwasị anya na omume anọ edepụtara na Ebumnuche na Mezọ: enweghị ike, ọrụ ebere, ọrụ aka, na ịda ogbenye afọ ofufo.
Onye ọrụ Katọlik na-etinye aka na enweghị nkwalite amụbaala kemgbe ọtụtụ afọ. Ido udo nke Dorothy Day gbanyere mkpọrọgwụ tupu Agha IIwa nke Abụọ, mana ọ siri ike n'oge ahụ, mgbe ọtụtụ mmadụ hapụrụ Onye Ọrụ ma ọ bụ kagbuo ndebanye aha ha na akwụkwọ akụkọ n'ihi mmegide a na-eme megide Day ahụ. Nkwenkwe ndị a gbanyere mkpọrọgwụ ná nghọta nke ozizi Jizọs na akparamaagwa nke ozioma dika nke aghara (dika, tugharia gi na nti) ka o ghaghakwa onodu (dika, mgbe Jisos kwaturu tebụl nke ndi nbinye ego temple). N'oge a na-alụ Agha Vietnam, ndị ụkọchukwu Katọlik Philip na Daniel Berrigan (ndị enyi nke Katọlik Worker) gbara akwụkwọ ọkụ nke okwukwe Katọlik ha kpaliri. Nkwado ndị ọrụ nke ndị Berrigans na ndị na-alụ ọgụ ọgụ yiri nke ahụ mere ka aha ya dị ka nnukwu ikike nke ọgụ na-enweghị isi, mmegide megide agha, na ime udo nke Katọlik n'oge oge ọtụtụ agha na agha gwụrụ ọtụtụ ndị na-eto eto. Na-arịwanye elu, ndị ọrụ Katọlik na-arụ ọrụ na gburugburu obodo ahụ malitere ịdọrọ ndị agha agha na-achọ obodo ebe a ga-akwado echiche ha, ọkachasị ma ọ bụrụ na ha bụ ndị Katọlik, ebe ọ bụ na nkuzi nke Chọọchị Katọlik dịkwuo njikere maka agha na ime ihe ike n'ọnọdụ ụfọdụ.
Ọrụ ebere (nke ọtụtụ ndị Katọlik na-arụ n'ọchịchị na-enye ndị agụụ na-agụ nri, na-enye ndị akpịrị na-a drinkụ mmiri, na-eyi ndị gba ọtọ uwe, na-echebe ndị na-enweghị ebe obibi, na-elekọta ndị ọrịa, na-eleta ndị nọ n'ụlọ mkpọrọ, na lie ndị nwụrụ anwụ) dị na ụfọdụ ụzọ dịkarịsịrị mkpa na nkwenye Katọlik kwenyere, ebe ọ bụ na ụlọ ọbịa nke mbụ amalitere iji nye ohere maka omume ha. Na ọdịnala ndị Kraịst, ọkachasị ọdịnala Katọlik, a na-ahụ ọrụ ebere dị ka ihe dị mkpa nye ndụ ndị Kraịst. N’isi nke iri-na-ise nke ozi-ọma nke Matiu, a kọọrọ na Jizọs na-agwa ndị na-eso ụzọ ya na ka ha wee banye n’ala-eze nke elu-igwe, na ha kwesịrị imere ụmụnne ha ndị nwoke na ndị nwanyị nọ na mkpa ihe ndị a dịka ha gaara emere ha. Jizọs n'onwe ya. Ndị ọrụ Katọlik anaghị arụ ọrụ ebere, kamakwa na-agba ndị ọzọ ume itinye aka na omume ndị a. Ọzọkwa, a na-ekwupụta nkwenkwe ndị Katọlik Katọlik ndị a banyere ihe ọ pụtara ịbụ Onye Kraịst n'ọtụtụ ọrụ nka, nke a na-egosipụtakarị n'ime ụlọ dị ka ihe ncheta banyere mkpa ọrụ ebere dị na ndụ ndị ọrụ Katọlik.
Ọtụtụ ndị ọrụ Katọlik kwenyere na ịdị mkpa nke ọrụ aka na ịda ogbenye afọ ofufo, ọ bụ ezie na nkwenkwe ndị a adịchaghị mkpa na ọ bụghị ndị otu obodo niile na-ekerịta nkwa ndị a. N'agbanyeghị nke ahụ, ọtụtụ ndị ọrụ Katọlik na-etinye ego dị mfe, na-ebi n'obere ime ụlọ nwere akwa ndina, iri nri sitere na nri ndị e nyere n'onyinye, yi uwe ndị enyere onyinye, na ịrụ ọtụtụ ọrụ nke ụlọ (ịsa efere, ịsacha ala ụlọ, ịrụzi mgbidi. ) onwe ha, n'agbanyeghị ma ndị ọrụ afọ ofufo oge niile nwere ogo mahadum ma ọ bụ si na ọgaranya. A na-ewu ọtụtụ ụlọ ọbịa dị ka ebe ndị mmadụ nwere ike iji aka ha rụọ ọrụ yana ebe ndị gụrụ akwụkwọ nke ọma, ndị ọrụ afọ ofufo na-ebi n'otu ọnọdụ dịka ndị si n'okporo ámá a kpọrọ ka ha biri n'ụlọ ahụ dị ka ndị ọbịa. Nkwenye na mkpa ọrụ aka dị na nkwenye siri ike na ọtụtụ nsogbu nke ọha mmadụ nke oge a bụ n'ihi nkewapụ sitere na ngwaahịa nke ọrụ mmadụ yana nkwenye na ọrụ aka dị mma maka ahụ na uche. A na-ahụ ịda ogbenye afọ ofufo dị ka ihe dị mkpa n'ihi na ọ na-ekewapụ onwe ya na oke ịba ụba na ọha mmadụ nke oge a ndi isi ike yana inyere mmadụ aka ibikọ n'otu na ndị ogbenye.
Ememe Katọlik nke ndị ọrụ na-adabere na ọrụ ebere na mkpesa na-enweghị isi megide militarism, enweghị ebe obibi, na nsogbu ndị ọzọ na-eche ọtụtụ ọha mmadụ nke oge a. Ọtụtụ obodo na-esonyekwa n'ememe ọdịnala Katọlik, dị ka uka na ikpe ekpere maka oge awa (ọkachasị, vespers). Ihe ndi ozo gunyere ihe omuma nke akwukwo dika ide akuko na ide ihe dika akwukwo ndi obodo n’eji ede akwukwo na akwukwo ozi. Ọtụtụ n'ime ememme ndị a gụnyere, ma ọ bụ n'ebumnuche ma ọ bụ na ọ bụghị, omume nke ịwepụ Onye Ọrụ Katọlik na ndị ọzọ, dị ka Chọọchị Roman Katọlik na ndị ọrụ na-elekọta mmadụ (Yukich 2010).
Ọ bụ ezie na obodo ọ bụla dị iche, imirikiti ndị Katọlik na-arụ ọrụ na-arụ ọrụ ebere. Ọtụtụ nwere kichin ofe, ebe nri, na / ma ọ bụ ebe akwa akwa. Edeela ọtụtụ akwụkwọ na edemede gbasara ọrụ nke onye Katọlik Katọlik na-arụ ọrụ na New York City. Ọtụtụ n'ime ndị a gụnyere nkọwa gbasara ememe ụbọchị niile nke obodo, nke na-enye echiche nke ihe emume Katọlik na-arụ. Na Josephlọ St. Joseph dị na New York City, e nwere ụsọ mmiri si na Mọnde ruo Fraịde. Kwa ụtụtụ, e nwere ndị ọrụ afọ ofufo a na-ekenye nnukwu ite ofe. Ndị ọrụ afọ ofufo ndị ọzọ na-egosi mgbe e mesịrị na bred achicha na ime biya ite tii. Tupu efere ofe amalite, ndị ọrụ afọ ofufo niile jikọtara aka na-ekpe ekpere maka ngọzi Chineke na obodo na ndị niile ga-eri ebe ahụ ụbọchị ahụ. Mgbe ahụ ndị mmadụ malitere itinye akwụkwọ n'ọnụ ụzọ ụlọ, na-anọdụ ala na tebụl ebe otu n'ime ndị ọrụ afọ ofufo na-enye ha otu efere ofe. Ndị ọrụ afọ ofufo na-ebutekarị tii na achịcha, na-enye ndị ọbịa ọfụma dịka mmadụ nwere ike ije ozi n’ụlọ nri. Ọtụtụ mgbe ndị ọrụ afọ ofufo na-ewepụta oge iji soro otu n'ime ndị ọbịa ahụ kparịta ụka, ọkachasị ma ọ bụrụ na ha ahụ onye ha maara.
Mgbe efere ofe ahụ gwụsịrị, ọtụtụ ndị ọrụ afọ ofufo na-aga n'ụlọ ha na ọrụ ha. Ndị ọrụ afọ ofufo bi n'ime ụlọ na -emezi nri ehihie maka ndị niile bi n'ụlọ ahụ. N'ehihie bụ a jụụ oge. Fọdụ ndị ọrụ afọ ofufo na-eso ndị bi na nke dọkịta emek, mgbe onye ọzọ na-eme nri abalị maka obodo, nke na-amalite mgbe niile na 5 PM. Otu onye si na Maryhouse, ụlọ ọbịa nke New York nke ọzọ dị na ebe dịpụrụ adịpụ abụọ, na-abịa na ngwa ahịa iji bulie oke nri ha. Mgbe onye ọ bụla risịrị nri, a ga-emerịrị efere, ehicha tebụl, ma sachaa ala. N’abalị Tuesday, ndị Katọlik na-esochi emume ndị a: ụkọchukwu na-abịa n’ụlọ kwa izu maka emume ahụ. N’abalị Fraịde, a na-esochi ha “nzukọ abalị Fraịde” nke ọha na eze n’isiokwu ndị dị iche na nke ime mmụọ nke St. Teresa nke Avila ruo n’ụlọ mkpọrọ dị na Guantanamo Bay.
Na mgbakwunye na emume a na-eme kwa ụbọchị nke obodo, nke ọrụ ebere bụ etiti, ọtụtụ ndị ọrụ Katọlik na-esonye mgbe niile na nnupụisi na-emegide agha na ụdị ime ihe ike ndị ọzọ. Otu n'ime ebe kachasị ebe maka ngagharị iwe a bụ ebe ndị agha na-ewe ndị ọrụ na Times Square. Na ngagharị iwe a na-ahụkarị, ndị ọrụ si n'aka ndị ọrụ Katọlik na ndị otu nwere ụdị uche a na-ewere ihe ịrịba ama na ebe a na-ewe ndị ọrụ, kwụpụta n'èzí na akara ngosi, ma gbochie ọnụ ụzọ iji gbochie onye ọ bụla ịbanye. Mgbe oge ụfọdụ gasịrị, ndị uwe ojii na-abịa jide ndị na-egbochi ibo ụzọ. Ọ na-abụkarị ndị na-eme ihere ole na ole na-anọ n'azụ iji chịkọta akwụkwọ mmado ma weghachite ha n'ụlọ. Mgbe ha nọsịrị obere oge n'ụlọ mkpọrọ, a na-ahapụkarị ndị ngagharị iwe ahụ, n'agbanyeghị na ha mechara pụta n'ụlọ ikpe. Ihe ka ọtụtụ na-eji ịga ụlọ ikpe dị ka ohere iji kọwaa echiche ha banyere omume rụrụ arụ na iwu na-akwadoghị nke agha na ime ihe ike.
Ọ bụ ezie na ụfọdụ n'ime ememme ndị a na-ahụkarị na obodo New York City, ebe ọ bụ na ndị ọrụ Katọlik ọ bụla dị iche, Emume obodo ọ bụla dịkwa iche. Fọdụ anaghị enwe ọhaneze mgbe ha bịara ile ọbịa. Fọdụ anaghị esonye na nnupụisi obodo. Agbanyeghị, ihe ka ọtụtụ n'ụdị nri dị iche iche ha na ndị na-enweghị ebe obibi na ndị ọzọ dara ogbenye na-ekerịta: ọ bụrụ na enwere emume ọ bụla a na-eme n'ọtụtụ obodo, ọ ga-abụ ụdị ọrụ a. Omume nke irikọ nri, oge ịtụkọtara ọnụ n'ụlọ nga, ime emume oke, na ndị ọzọ anaghị enyere ndị ọrụ Katọlik aka ibi ndụ nkwenkwe ha kamakwa ijikọ ha ọnụ, na -emepụta obodo dị n'otu.
Banyere 2014, enwere ụlọ na ndị ọrụ Katọlik karịrị 225 gburugburu ụwa. Ọtụtụ n'ime ndị a dị na United States, ọkachasị na Northeast, Midwest, na West, ebe ọnụ ọgụgụ ka elu nke ndị mmadụ n'ozuzu bụ ndị Katọlik karịa na ndịda. Ihe dị ka obodo iri abụọ na ise dị na mba ndị ọzọ, ọtụtụ na Western Europe n'agbanyeghị na ole na ole nọ na ebe dịka Central America, New Zealand, na Africa. Obodo dị iche iche na nha, na n'ihi agwa a na-achị achị na enweghị izu, enweghị aha ndị otu. Dịka ọmụmaatụ, na obodo New York City, ihe dị ka mmadụ iri na ise bụ ndị ọrụ afọ ofufo oge niile bi na ma ọ bụ dị nso n'ụlọ ndị ọbịa. Mmadụ iri atọ ọzọ na-ebi n’ụlọ ahụ dịka ndị ọbịa, ụfọdụ ga-adịte aka ma ụfọdụ ga-adị mkpụmkpụ, nọrọ ebe ahụ ruo mgbe ha laghachiri n’ụkwụ ha. Nnukwu obodo nke "ndị enyi ụlọ" (ihe dị ka iri ise ndị mmadụ n'otu oge) gụnyere ndị ọrụ afọ ofufo oge niile yana ndị na-aga Nzukọ Abalị Fraịdee, ụlọ ụlọ, ma ọ bụ ihe omume obodo ndị ọzọ. N'ihe gbasara mmasị na nkwado zuru oke, akwụkwọ akụkọ obodo, Onye ọrụ Katọlik, nwere ihe karịrị ndị debanyere aha 20,000 gburugburu mba ahụ. Ndị obodo na-akwụ ụgwọ kpamkpam site na onyinye nke onwe ha sitere na ndị na-akwado ya, bụ ndị enwere ike ịtụle dị ka akụkụ nke ngagharị n'ihi nkwado ha na-arụ ọrụ na-aga n'ihu.
N'obodo ndị Katọlik dị obere, ọtụtụ mgbe di na nwunye ga-ebido n'ụlọ ọbịa, soro ya rụọ ọrụ n'ụlọ ha na otu ndị ọrụ afọ ofufo oge niile ma ọ bụ abụọ na-akpọ ndị ọbịa atọ ma ọ bụ anọ ka ha nọrọ n'ụlọ ha. N'ihe banyere nha, ọtụtụ obodo na-edina n'otu ebe dị n'etiti obodo New York na obere, ezinụlọ na-agba ọsọ, na obodo ndị dị n'obodo ndị mepere emepe na-ebukarị ibu karịa ndị nọ na mpaghara ime obodo, ebe ọtụtụ n'ime ndị ọrụ Katọlik Katọlik. dị. Ugbo ala ndi oru Katọlik na-enye ndi oru wezuga onwe ha ezumike site na mpaghara ndi mepere emepe tinyere ebe ha ga-aru oru aka, ijikota ala ha, ma tolite nri nke a ga-enye aru n’ime ebe nri ndi obodo.
Ndị Katọlik na-arụ ọrụ mara mma karịa otu nzukọ. Ndị ọrụ Katọlik na-achọ ịkọwa ọdịiche dị n'etiti ọha mmadụ; ha na-achọkwa ịma ya aka site n’inye ihe ha hụrụ dị ka ụzọ kacha mma isi bie ndụ. A na-emegharị usoro a ka ọ bụrụ nke a na-ahazighị ahazi na enweghị onye isi ọrụ. Ọ bụ ezie na a na-ele Dorothy Day anya dị ka onye isi na-enweghị isi na njem ahụ, ebe ọ bụ na ọnwụ ya ọ nweghị onye bilitere iji mejupụta ọrụ ahụ. Agbanyeghị, a na-ahụkarị ụfọdụ obodo dị ka ndị kachasị mkpa ma ọ bụ dị ka ndị nlereanya maka obodo ndị ọzọ. Dị ka obodo mbụ, a na-elekarị obodo New York City anya dị ka onye na-ebu ọkọlọtọ site na obodo ndị ọzọ. N'agbanyeghị nke ahụ, ụfọdụ obodo ndị ọzọ na-ewere ya na ọ bụ ihe nketa nke Day na-emetụta ya ma na-adịghịkwa ngwa ngwa iji gbanwee oge a, na-egosipụta ụdị dịgasị iche iche banyere ọhụụ Onye Ọrụ Katọlik n'ime usoro ahụ. Ikike bụ nke kachasi n'ime obodo, nke ọ bụla n'ime obodo ndị a na-ahazi ikike ahụ n'ụzọ dị iche. N’ime obodo New York City, n’echiche, onye ahọpụtara “n’elu ụlọ” bụ onye na-elekọta oge a kara aka, emesịa onye ọzọ na-elekọta ya. Mana na omume, ikike dị ukwuu dị n'aka ndị ọrụ afọ ofufo oge niile bụ ndị na-ewekarị ọtụtụ mgbanwe ụlọ ahụ, ọkachasị ndị ọrụ afọ ofufo bi na mpaghara ogologo oge. N'obodo ndị ọzọ, ọkachasị ndị ọrụ anaghị akwụ ụgwọ, enwere ndị nduzi ma ọ bụ ndị ọrụ oge niile na-elekọta obodo.
Chọọchị Katọlik nwere ikike na ndị ọrụ Katọlik naanị dịka ọtụtụ ndị obodo na-ahụ onwe ha dị ka ndị Katọlik ma chọọ iso ụka ahụ kama ileghara ya anya. Ka osi di, otutu obodo ekwenyeghi n’ozizi na omume ufodu nke Uka, nekwu na nkuzi nke “isi nke uche” nyere ha ikike (ma obu oru) nke ikwenye na nkuzi ndi ha kwenyere na ha megidere uche Chineke. Fọdụ obodo anaghị amata Katọlik ma ọlị, dịka Haley House dị na Boston. Ọ bụ ezie na ụfọdụ obodo na-agbasochi nkuzi na omume ụka anya karịa ndị ọzọ, mgbanwe dị na nrapara nke agbasoro oge ụfọdụ na-akpata esemokwu n'ime mmegharị ahụ, ụfọdụ na-achọ ịmanye ịdị n'otu na ịdị n'otu na obodo dị na njem ahụ.
Imirikiti ndị ọrụ Katọlik na-ajụ ọnọdụ 501 (c) 3 na ego gọọmentị n'ihi na ha achọghị ịkwado ihe ha na-ahụ dị ka usoro rụrụ arụ, nke ime ihe ike. Kama nke ahụ, ọ bụ onyinye nke onwe na-akwado ọrụ ha kpamkpam. Ndị a gụnyere onyinye ego sitere na ndị na-akwado ya yana onyinye nri na uwe sitere na azụmaahịa mpaghara na ndị otu obodo. N'ihi ya, obodo dị na tiori na-ahụ ndị nyere aka na-akwado ha. Ọ bụ ezie na ogo nke a bụ n'ezie ihe dịgasị iche site na obodo, n'ọtụtụ obodo, ndị nyere onyinye n'eziokwu anaghị enwecha mmetụta na mkpebi. N'ihi na ndị ọrụ Katọlik nwere mmasị na obodo dabere na ntinye aka na ụkpụrụ ndị na-ekekọrịta, ọ ga-abụ na ha agaghị agbanwe ụkpụrụ ndị ahụ naanị ịme ndị na-enye onyinye nwere obi ụtọ. E nwere akụkọ ihe mere eme nke ịjụ imebi iwu n'ime usoro ahụ. Dị ka e kwuru na mbụ, n'oge Agha Worldwa nke Abụọ, Dorothy Day dere na Onye ọrụ Katọlik akwụkwọ akụkọ banyere enweghị njikere imebi mkpebi udo ya na agha ahụ. Echiche ya bụ nke a na-enweghị mmasị na ya, akwụkwọ akụkọ ahụ tụfuru ọtụtụ puku ndị debanyere aha (na ndị nyere onyinye) n'ihi ya. N'agbanyeghị nke ahụ, Day kwenyesiri ike na ya ziri ezi nakwa na Chineke ga-egboro ndị obodo ahụ n'ụzọ ndị ọzọ, ndị obodo lanarịrị oge ahụ na oge ndị ọzọ siri ike n'akụkọ ihe mere eme ya.
Ndị ọrụ Katọlik na-ahụ onyinye dị ka onyinye sitere na Chukwu na nkwenye nke ọrụ ha kama ịbụ ihe ziri ezi nye ndị nyere onyinye na-emetụta ọfụma ahụ. N'ezie, ihe ka ọtụtụ ná ndị na-enye Onye Ọrụ ahụ onyinye ziri ezi n'ihi na ha chọrọ ịkwado otu ndị na-emegide ọchịchị aka ike nke na-adịghị ahụ ụdị ọdịmma ọ bụla. N'ikwekọ na nkà ihe ọmụma onwe onye ha, ndị otu obodo na-achọ ịnọgide na-enwe ezi mmekọrịta na ndị nyere ha, na-echebara ha echiche dị ka ndị mmadụ ma na-egosi ekele ha maka onyinye ha. Mmekọrịta ndị a bụ ntọala maka inye onyinye na-aga n'ihu, ọ bụghị naanị ịgbaso otu echiche na ụkpụrụ.
Ndị ọrụ Katọlik Katọlik echewo ọtụtụ ihe ịma aka ihu oge, ụfọdụ na-ahụkarị njem ahụ na ụfọdụ ụfọdụ obodo ụfọdụ. Na ọkwa sara mbara, ọnwụ Dorothy Day na 1980 mere ka ije ahụ nwee ntakịrị. Àgwà ya na nduzi ya bụ isi ọ bụghị nanị maka obodo ndị New York City kamakwa maka ọhụụ ndị ọrụ Katọlik n'ozuzu. N'agbanyeghị nke ahụ, àgwà a na-achịkwaghị achịkwa na nke a na-ahazighị ahazi mere ka ọ gbanwee, dịrị ndụ, ma nwee ọganihu ọbụna mgbe ọnwụ nke onye nhazi ya na onye etiti ya. Ọ dịghị onye ọ bụla bilitere iji were ọnọdụ asbọchị dị ka ihe na-akpali akpali maka mmegharị ahụ dum, ọ bụ ezie na o doro anya na nke a bụ ihe ịma aka maka njem ahụ na ọdịnihu ya karịa ime ka ọ bụrụ onye a ma ama na mgbasa ozi.
Nke a nwere ike bụrụ nsogbu karịa ụka Katọlik na-aga n'ihu n'ime mbọ iji mee Dorothy Day ka ọ bụrụ onye nsọ. N'ihi mkpakọrịta siri ike ya na ndị ọrụ Katọlik, ọ bụ ihu ọha na-agagharị na ihe ọ bụla ọ pụtara. Mana ka Chọọchị na-ebugharị towardbọchị rue ịdị nsọ, ọ kpachapụrụ anya n'ụzọ ụfọdụ nke ndụ ụbọchị ma chee echiche mgbe ọ na-ekwusi ike na ndị ọzọ na-adịchaghị mkpa na ọrụ ya kwa ụbọchị mana ha kwekọrọ na nkuzi nke ndị isi ụka. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụ ezie na mkparịta ụka ụka nke ụbọchị Day na-emetụtakarị enweghị ọchịchị ya na enweghị ntụkwasị obi, ha na-ekwusi ike na ọ na-akwa ụta maka ime ime ya na nkwenkwe ọdịnala ya banyere mmekọahụ.
Ndị ọrụ Katọlik ekwekọrịtaghị n ’ọtụtụ ihe. Fọdụ kwenyere na ndị ọrụ Katọlik niile kwesịrị ịbụ ndị Katọlik (na, ọzọkwa, ụfọdụ chere na ha kwesịrị ikwenye na nkuzi niile nke Churchka), ebe ndị ọzọ ekweghị na mgbochi ndị a. Fọdụ na-agbaso iwu siri ike banyere iji teknụzụ, na-agbaso ọnọdụ Day na Maurin na ụzọ nke teknụzụ si emebi ihe n'ozuzu yana ọkachasị ndị ogbenye, ebe ndị ọzọ nwere ebe nrụọrụ weebụ mara mma na / ma ọ bụ Facebook. Somefọdụ obodo jụrụ itinye akwụkwọ maka ọnọdụ anaghị akwụ ụgwọ (501 (c) 3), na-arụ ụka na obodo kwesịrị ịmekọrịta mmekọrịta na steeti ma zere ọrụ nchịkwa, ebe ndị ọzọ na-ahụ ọnọdụ enweghị ọrụ dị ka ụzọ iji rụọ ọrụ ebere nke ọma. Esemokwu ndị a dị mkpa, mana n'ihi na a na-achịkwa usoro a, ha anaghị atụ egwu ịdị adị nke otu ahụ n'ihi na otu dị iche iche na-enwekarị mmekọrịta ọ bụla na ibe ha, na-ahapụ onye ọ bụla ka ọ rụọ ọrụ dịka ọ chọrọ.
Ihe ịma aka kasịnụ nke òtù ahụ esiteghị na esemokwu dị n'etiti obodo kama site na mgbanwe mgbanwe igwe mmadụ n'ime ha. Ọ bụ naanị otu ezinụlọ ma ọ bụ di na nwunye malitere ọtụtụ obodo ndị ahụ. Ọ bụ ezie na ha na-etolite na-agụnye ọnụ ọgụgụ ka ukwuu nke ndị mmadụ, ndị ahụ na-adịkarịkarị nwayọọ, ebe ndị guzobere ya na-ejikọ mama na-ejikọ obodo ọnụ. Dika ndi nchoputa ahu noo, mgbe ufodu o siri ike imata onye, ​​ma oburu na onye obula, gha enwe ike igba ochichi n’oha n’iru.
Ajuju banyere onye ga - eme ka ndi obodo gbaa oso di nkpa na ulo ka buru ibu. Dika ndi otu ndi otu obodo na ndi ndu, ha na echegbu onwe ha mgbe ufodu na ndi mmadu ezughi oke itinye aka na onye oru Katoliki idebe ulo, na mmeghari ya. Dị ka ọmụmaatụ, na obodo New York City, a ka nwere ndị nọ n'ụlọ ahụ maara ụbọchị Dorothy mgbe ọ dị ndụ, mana imirikiti n'ime ha dị afọ isii ma ọ bụ afọ iri asaa ma ọ bụ gafere n'afọ ndị na-adịbeghị anya. O nwere ike ịbụ na onye ọrụ Katọlik gbasiri ike mgbe ụbọchị ụbọchị gasịrị n'ihi na ụfọdụ ndị ya na ha dịkọrọ ndụ dị ndụ iji mee ka ọhụụ ya gaa. Ezigbo nnwale nwere ike ịbụ ma obodo ndị a ọ ga-adịgide mgbe oge ahụ gwụsịrị.
Enweghị ndị na-eto eto karịsịa bụ nchegbu na-emetụta ụfọdụ obodo ndị Katọlik. N’ọtụtụ obodo, ndị nọ n’afọ iri abụọ na atọ na-ewepụta onwe ha otu ugboro ma ọ bụ ugboro abụọ n’izu ma ọ bụ ọbụna ruo ọtụtụ ọnwa n’otu oge. Agbanyeghị, ụfọdụ obodo nwere nsogbu ịchọta ndị na-eto eto gbasoro ịbanye na otu ahụ ogologo oge. Nke a na - eme ka o sie ike ịkọ ihe traktị nke obodo ga - abụ na ma ha ga - enwe nkwụsi ike n’ọdịnihu. Nkwenye siri ike nke onye ọrụ Katọlik banyere ịzụ ahịa na teknụzụ na-abụkarị ihe ịma aka nye ndị na-eto eto n'oge ha abụọ bụ akụkụ dị mkpa nke ndụ kwa ụbọchị. Mgbanwe igwe mmadụ na-agbanwe na Chọọchị Katọlik nwekwara ike iweta ihe ịma aka iji dịrị ogologo ndụ: na-arịwanye elu, ndị ntorobịa America bụ ndị Katọlik si n'ezinụlọ ndị Katọlik "nwere ọdịnala", nwere ụmụaka nke ndị Katọlik "na-emesapụ aka" (na ọtụtụ ndị Katọlik n'ozuzu ha) na-arịwanye elu Chọọchị kpamkpam (Smith et al. 2014). Ọdọ mmiri nke ndị ọrụ Katọlik nwere ike ịbelata, opekata mpe na US
N'agbanyeghị nsogbu ndị a, ndị ọrụ Katọlik ọhụrụ na-aga n'ihu na-apụta. N'oge na-adịbeghị anya, ndị ọrụ Katọlik Katọlik izizi n'Africa bidoro na Uganda. Ikekwe obodo ndị ọzọ emepere emepe ga-emesị mechie, ebe obodo ndị ọzọ, gụnyere na mpụga US, ga-eto. Ọ bụ ezie na ọ ga-ewute ha iche echiche ọdịda nke obodo nke aka ha, ọtụtụ ndị ọrụ Katọlik ga-ekweta na ebibi na mmụba nke obodo dabara na ọhụụ Katọlik. Robọchị Dorothy nwere mmasị ịsị na Onye Ọrụ Katọlik dị ka ụlọ akwụkwọ ebe ụmụ akwụkwọ bịara ịmụ ihe wee pụọ iji tinye ọrụ ebere n'ime mbọ ndị ọzọ (Riegle 2014). O kwenyere na mmeghari a ga-adịgide ma ọ bụrụhaala na ọ dị mkpa maka ya. Taa, ịda ogbenye, militarism, ịre ahịa, na oke teknụzụ ka bụ isi okwu n'etiti ọha mmadụ America. Ajụjụ bụ ma a ka hụrụ ha dị ka nsogbu na ma ụzọ Katọlik n'ụzọ pụrụ iche n'okwu ndị a ka na-ada ụda n'ọtụtụ ebe. Ọ bụrụhaala na azịza nye ajụjụ abụọ a bụ ee, ndị ọrụ Katọlik nke Katọlik nwere ike ịnọ otu ebe, na-enye azịza ya dị mfe ma bụrụ amụma banyere nhụjuanya ụwa: “Nanị ihe ngwọta bụ ịhụnanya” (Day 1952: 285).
Aronica, Michele Teresa. 1987. N'ihe na-edu ndú na-adọrọ adọrọ: The New York Catholic Worker Movement. New Brunswick, NJ: Akwụkwọ Akwụkwọ azụmahịa.
Cornell, Tom. 2014. "Nkọwa Okwu Mmeghe nke Ndị Ọrụ Katọlik." Ndị ọrụ Katọlik Katọlik. Nweta site na http://www.catholicworker.org/historytext.cfm?Number=4 na 4 November 2014.
Coy, Patrick G. 2001. "Nnwale na ndọrọ ndọrọ ọchịchị nke onwe: Ọrụ Ndị Katọlik na Ọrụ Ndị Na-emeghị." Udo na Mgbanwe 26: 78-94.
Ụbọchị, Dorothy. 1952. Long Loneliness. San Francisco, CA: Harper & Ahịrị.
Ohia, Jim. 2014. "Peter Maurin: ngalaba-guzobere Katọlik Ọrụ Ọrụ ije." Ndị ọrụ Katọlik Katọlik. Nweta site na http://www.catholicworker.org/roundtable/pmbiography.cfm na 4 November 2014.
McKanan, Dan. 2008. Onye Katọlik na-arụ ọrụ mgbe Dorothy gasịrị: Na-arụ Ọrụ nke Ebere na Ọgbọ Ọhụrụ. Collegeville, MN: Liturgical pịa.
Murray, Harry. 1990. Eleghara Ile Ọbịa: Ndị Katọlik Na-arụ Ọrụ na Ndị Na-enweghị Ebe Obibi. Philadelphia, PA: Universitylọ ọrụ University University.
Riegle, Rosalie G. 2014. "Ndị ọrụ Katọlik Katọlik na 2014: Ekele." Ihe Montre al Nyocha, August 2014. Nweta site na http://www.themontrealreview.com/2009/The-Catholic-Worker-Movement.php na 4 November 2014.
Smith, Christian, Kyle Longest, Jonathan Hill, na Kari Christoffersen. 2014. Young Catholic America: Ndị okenye na-apụta, na-apụ, ma pụọ ​​na Chọọchị. New York: Oxford University Press.
Spickard, James V. 2005. "Ritual, Symbol, and Experience: Understanding Catholic Worker House Mass." Sociology nke Okpukpe 66: 337-57.
Thorn, William J., Phillip M. Runkel, na Susan Mountin, ụmụ nwoke. 2001. Robọchị Dorothy na Onye Ọrụ Katọlik: Akwụkwọ akụkọ Centenary. Milwaukee, WI: Marquette University Press.
Yukich, Grace. 2010. "Ọrụ Oke ke Okpukpe Okpukpe Na-esonye: Na-ewu Identmata na New York Katọlik Na-arụ Ọrụ." Sociology nke Okpukpe 71: 172-96.
Zwick, Mark, na Louise Zwick. 2005. Ndị ọrụ Katọlik Katọlik: ọgụgụ isi na nke mmụọ. Mahwah, NJ: Paulist Press.
CATHOLIC ỌR MOV MOVEME Njikọta